ကြာသပတေးနေ့, မေလ 31, 2012 အင်္ဂါနေ့, မတ်လ 1, 2016 Douglas Karr
ဒါကရယ်စရာအကောင်းဆုံးထဲကတစ်ခုဖြစ်နိုင်တယ် အဲဒီ infographics DK New Media ယနေ့အထိပြုတော်မူပြီ ငါတို့ဖောက်သည်တွေအတွက်သတင်းအချက်အလက်အမြောက်အများလုပ်ထားတယ်။ ဒါပေမယ့် eConsultancy မှာဆောင်းပါးကိုဖတ်ရင်းလူတွေကတွစ်တာမှာဘာကြောင့်မဖြစ်ထွန်းတာလဲဆိုတာကိုချက်ချင်းဖတ်မိရင်အဲဒါကအရမ်းကိုပျော်စရာကောင်းတဲ့ infographic ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာပဲ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ infographic ဒီဇိုင်နာသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ရိုးရိုးဆုံးအိပ်မက်များထက် ကျော်လွန်၍ ကယ်တင်ခဲ့သည်။
တွစ်တာမှာသင်အရမ်းဆူညံနေလား သင်များလွန်းသောရောင်းအားတွန်းအားပေးနေပါသလား သငျသညျအရှက်မရှိသောလူများကိုစာပို့ပါသလား ဒါမှမဟုတ်ပျော့ပျောင်းနေတာလား ငါဒီအကြောင်းပြချက်တွေအားလုံးကိုစကားလုံးတစ်လုံးလောက်ခြယ်နိုင်ရင်ပေါ့ အဘိုး။ အကယ်၍ မင်းပရိသတ်ကိုတန်ဖိုးမထားဘူးဆိုရင်သူတို့ကမင်းနဲ့နေမှာမဟုတ်ဘူး။
နောက်ထပ် ado မရှိရင်၊ လူတွေသင့်ကိုတွစ်တာမှာနောက်လိုက်မယ့်အဓိကအကြောင်းရင်းတွေပါ။
ကျွန်တော်တို့ကိုခွင့်ပြုချက်အတွက် eConsultancy အတွက်အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ် post ကိုရေးသားဖို့သူတို့ရဲ့ဒေတာကိုသုံးပါ!
Tags: သဘာဝinfographictwitter ထားခဲ့ပါအကြောင်းပြချက်ကလူ unfollowတွစ်တာtwitter သတင်းအချက်အလက်နောက်ဆက်တွဲမလိုက်သောအကြောင်းပြချက် twitter
လူမှုမျှဝေခြင်း Button ကစားကွင်း
1:2012 pm မှာဇွန် 7, 02
ဒီတစ်ခုကိုချစ်ပါကကြီးသော pin ကိုဖြစ်စေမည်! အဲဒါဘယ်ကလာသလဲဆိုတာဖော်ပြဖို့သေချာပေါက်ပါလိမ့်မယ်။
1:2012 pm မှာဇွန် 9, 10
1:2012 pm မှာဇွန် 8, 36
စိတ်ဝင်စားစရာဖတ်ပါ။ ဆိုရှယ်မီဒီယာနှင့်ပတ်သက်သောပြpeopleနာမှာလူများသည်၎င်းတို့ကိုမည်သူနောက်သို့လိုက်နေသည်ကိုစွဲလမ်းစေခြင်းဖြစ်သည်။ ငါ့မှာသူငယ်ချင်းကောင်းတွေရှိတယ်။ သင်ကိုယ်တိုင်အွန်လိုင်းတွင်သာရှိရန်လိုအပ်ပြီးလူတို့မနှစ်သက်ပါကသူတို့၏ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်သည်။ သင့်နောက်ကိုလိုက်ရန်လူများအားသင်ကိုယ်တိုင်မပြောင်းပါနှင့်။ လင်ကွန်းကိုမှားယွင်းစွာပြောရန်“ မင်းကလူအချို့ကိုတစ်ချိန်လုံးစိတ်ကျေနပ်စေနိုင်ပြီးလူအားလုံးကိုလည်းအချို့သောအချိန်တွေကိုနှစ်သက်စေတယ်၊ ​​ဒါပေမယ့်မင်းလူတွေအားလုံးကိုတစ်ချိန်လုံးစိတ်ကျေနပ်စေတယ်”
1:2012 pm မှာဇွန် 10, 37
@ twitter-14119971: ငါလုံးဝသဘောတူလက်ခံတယ်။ Corey! လွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်လောက်ကကျွန်တော့်နောက်ကိုလိုက်လာတဲ့လူဘယ်နှစ်ယောက်အကြောင်းမစိုးရိမ်တော့ဘူး။ လွတ်လပ်ခွင့် !!!
1:2012 pm မှာဇွန် 9, 39
စီးပွားရေးအတွက် Twitter ကိုထိရောက်စွာအသုံးချခြင်းနှင့်စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ခြင်းသည်ကောင်းမွန်သောအချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဆူညံမှုနှင့်စုပြုံပြွတ်သိပ်မှုများကိုဖြတ်သန်းရန်အကြိမ်များစွာတင်ရန်သွေးဆောင်ခံရသော်လည်းသင်သတိထားရန်လိုအပ်သည် အကယ်၍ သင်ထပ်တူထပ်တူမက်ဆေ့ခ်ျကိုထပ်မံပေါ်လာပါကနောက်လိုက်များကသင့်ကိုညှိပေးလိမ့်မည်သို့မဟုတ်သင့်ကို လိုက်၍ မပေးပါ။
Hazel M က Walker က
ဇွန် 1, 2012 မှာ 5: 21 pm တွင်
အဲဒါကကျွန်မကိုသူကပြောတဲ့အရာတစ်ခုလုံးကနေလမ်းလျှောက်ချင်စေတယ်။ ဟုတ်ပြီ ကျွန်ုပ်၏နောက်လိုက်အများစု၏တွစ်တာတွင်မည်သည့်အရာကမျှကောင်းသော link များနှင့်အကြောင်းအရာများကိုထည့်သွင်းထားခြင်းမရှိသော်လည်းအများစုသည်အခြားနေရာများတွင်အကောင်းဆုံးစကားပြောဆိုမှုများပြုလုပ်ရန်ယင်းကိုအသုံးပြုကြသည်။ ကျွန်ုပ်စာရင်းကိုရှင်းထုတ်ပြီးနောက်မှမဟုတ်သောသူများအားအမှိုက်ပစ်လိုက်သည်။ ငါ့ကိုသိသောအခါငါပြစ်မှားလျှင်၊ ငါ့ကိုရှာ။ မတွေ့ပါနှင့်။
ဇွန် 1, 2012 မှာ 6: 14 pm တွင်
ဇွန် 3, 2012 မှာ 1: 40 pm တွင်
ကျွန်တော်ဒီဟာကိုကျွန်ုပ်၏အင်တာနက်စျေးကွက်ရှာဖွေရေး pinboard ထဲသို့ထည့်ပါ။ “ ဆူညံခြင်း” နှင့်သက်ဆိုင်ရာနှင့်စိတ် ၀ င်စားဖွယ်အကြောင်းအရာများကိုမျှဝေခြင်းကြားတွင်ပျော်ရွှင်သောနည်းလမ်းရှာရန်ခက်ခဲကြောင်းကျွန်ုပ်သဘောတူသည်။ သို့သော်တကယ့်သော့ချက်မှာသင်၏ထုတ်လွှင့်မှုများကိုအမှန်တကယ်စိတ်ဝင်စားသောနောက်လိုက်များတည်ဆောက်ရန်နှင့်“ သာမန်” အသံလွှင့်ရုံ မှလွဲ၍ အခြားသူများနှင့်အမှန်တကယ်ချိတ်ဆက်ရန်စကားစမြည်စတင်ရန်ဖြစ်သည်။ ”
Penguins Pete Trbovich
6:2012 pm မှာဇွန် 2, 21
ပြသခြင်းကပြသခြင်းက“ စာရင်းအင်းပညာမဖြစ်ရန်လိုအပ်သည့်အရာများ” ကိုပြခြင်း။
နောက်ပြီးသတင်းပို့ရမယ့်အချက်တစ်ချက် - သင့်ကိုနောက်ရက်အနည်းငယ်အကြာနောက်လိုက်သူများသည်၎င်းတို့အားသင်အလိုအလျောက်နောက်သို့လိုက်မည်လားဆိုတာကြည့်ရှုရန်ဖြစ်သည်။ ဒါကငါ့အတွေ့အကြုံအတွက်အများစုဖြစ်ဟန်ရှိသည်။
6:2012 pm မှာဇွန် 2, 40
infographic ဖြစ်ဖို့မလိုဘူးဆိုတာကိုငါလုံးဝသဘောမတူဘူး။ ကိန်းဂဏန်းများသည်မုသာမသုံးပါ။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အောင်မြင်မှုအရှိဆုံး infographics တစ်ခုဖြစ်သည်။ ငါတို့သာဒီအကြောင်းကိုရေးခဲ့မယ်ဆိုရင် ... အိုးစောင့်ပါ၊ ထိုအရာ post ကိုဒီလုပ်ခဲ့တယ်အကျိုးစီးပွားအနည်းငယ်ရတယ်။
သတင်းအချက်အလက်ကိုမည်သည့်အရာသို့မဟုတ်မည်သည့်နေရာတွင်မထည့်သင့်သည်ဟူသောစည်းမျဉ်းများမရှိပါ။ ရယ်စရာကောင်းသောပုံဖော်ထားသောဂရပ်ဖစ်သည်ကောင်းစွာလုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ သမားရိုးကျသို့မဟုတ်အစဉ်အလာအတွေးအခေါ်ကြောင့်အလုပ်လုပ်သောအရာတစ်ခုခုကိုမရပ်တန့်ပါစေနှင့်။ ဤကိစ္စတွင်အတွက်တောက်ပအလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။
PS: Auto DMs အဲဒီမှာရှိတယ်
ဇွန် 18, 2012 မှာ 9: 13 pm တွင်
စုစုပေါင်းဆန္ဒမဲ ၁၀၀% = ၂၂၇၀ လို့သတ်မှတ်ထားတဲ့စာရင်းဇယားတွေကိုငါပြန်ပြီးပြင်ဆင်လိုက်ပြီ
အရမ်းဆူညံနေသည် (မကြာခဏတွစ်တာများ) [၁၂% - ၂၇၁ မဲ]
ကိုယ့်အားကိုယ်မြှင့်တင်မှုအလွန်များ [11% - 249 မဲ]
Spammy [၁၁% - ၂၄၅ မဲ]
စိတ် ၀ င်စားစရာမလုံလောက်ပါ။ [၁၀% - ၂၂၆ မဲ]
ထပ်ခါတလဲလဲပြောဆိုမှုများ [7% - 152 မဲ]
အလိုအလျောက်အလွန်အကျွံ [7% - 151 မဲ]
ထိုးစစ် / ကျွမ်းကျင်မှုမရှိ [6% - 146 မဲ]
များစွာသော 'သူတောင်းစားတွစ်တာ' များ [၆% - ၁၄၅ မဲ]
အရမ်းတိတ်ဆိတ် [6% - 141 မဲ]
Foursquare / check-in ချိုးဖောက်သူများကို [၅% - ၁၁၅ မဲ]
စကားပြောဆိုမှုမရှိသည့်တွစ်တာများ [၅% - ၁၀၈ မဲ]
သဒ္ဒါကိုချိုးဖောက်သောရာဇ ၀ တ်မှုများ [၄% - ၉၃ မဲ]
retweets များလွန်း [4% - 90 မဲ]
အလိုအလျောက် / DM အလွဲသုံးစားမှု [၄% - ၈၆ မဲ]
Hashtag အလွဲသုံးစားလုပ်သူများ [၂% - ၅၂ မဲ]
အခုတော့ငါ tweeting စောင့်ရှောက်နိုင် ... 😉
ဇွန် 18, 2012 မှာ 10: 09 pm တွင်
ငါအထက်တွင်ဖော်ပြသကဲ့သို့, ဒီအမှုမဟုတ်ပါဘူး။ ပထမ ဦး စွာစစ်တမ်းသည်ပွင့်လင်းသောစစ်တမ်းဖြစ်ပြီးလူတစ် ဦး သည်သူဆန္ဒရှိသလောက်အကြိမ်ပေါင်းများစွာဝင်ရောက်နိုင်သည်။ ဒုတိယအချက်မှာတစ်ကြိမ်ထက်ပိုပြီးထောက်ပံ့နိုင်သည်။ ကျေးဇူးပြုပြီးစစ်တမ်းကောက်ယူပါ http://twtpoll.com/un5lxe
ဇွန် 18, 2012 မှာ 9: 15 pm တွင်
ဒီတော့အားလုံးရာခိုင်နှုန်းစုစုပေါင်း 435% အထိ add ??? စိတ်မကောင်းပါဘူး၊ ငါဒါကိုတကယ်မရခဲ့ဘူး။ ဒီဟာကိုဘယ်သူမဆို ၁၀၀% ဒီဇိုင်းနဲ့ 100% သင်္ချာကိုလေ့လာခဲ့တာလား။
ဇွန် 18, 2012 မှာ 10: 07 pm တွင်
အယ်လင်နာ၊ သင်ဖြေဆိုသူများသည်စစ်တမ်းတစ်ခုစီအတွက်အဖြေတစ်ခုသာပေးနိုင်လိမ့်မည်ဟုသင်ယူဆနေသည်။ ဒါမဟုတ်ပါဘူး။
မေလ 16, 2014 မှာ 4: 00 pm တွင်
လူများအားလုံးကိုတချိန်လုံးမကျေနပ်နိုင်ပါ။ လူတွေကိုတွစ်တာကိုသုံးတဲ့ကွဲပြားခြားနားတဲ့နည်းလမ်းသုံးခုရှိတယ်။ အချို့က၎င်းကိုသီးသန့်စကားဝိုင်းကဲ့သို့အသုံးပြုကြသည်။ ငါလိုတခြားသူတွေကအရည်အသွေးကောင်းတဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေကိုဝေငှဖို့သုံးတယ်။ မြင့်မားသောအသံပမာဏကိုမနှစ်သက်သောသူများသည်ကျွန်ုပ်၏ပစ်မှတ်ထားပရိသတ်မဟုတ်ပါ။ ငါသိပ်များများစားစားမဝေငှရင်တောင်ငါပါ ၀ င်တဲ့တွစ်တာစကားပြောသံကသူတို့အတွက်အကျိုးရှိလိမ့်မယ်။ တစ်ခုချင်းစီကိုသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ရန်။
မေလ 16, 2014 မှာ 4: 02 pm တွင်
@Nick Stamoulis ငါသဘောတူတယ် တစ်ကြိမ်ထက်ပိုပြီးဝေမျှရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းမှာမည်သူ့ကိုမှမထွန်းကားစေရန် tweet တစ်ခုချင်းစီကိုထူးခြားစေရန်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သင်၏ message ကို နှိပ်၍ ကလစ်နှိပ်ခြင်းဖြင့်သင့်ကိုခွင့်ပြုသည်။